‘मुर्दाको शहर’ भनि चिनिने रहस्यमयी गाउँ जहा एकपटक मानिस गए पछि फर्की आऊदैन – Krazy NepaL
November 2, 2020 625
यो संसार बिचित्रको छ विभिन्न रहस्यमयी कुराहरुले यो सारा बिश्व अडिएको छ। संसारमा यस्ता अचम्मका स्थानहरु रहेका छन जसको बारेमा कमै मानिसहरु मात्र परिचित रहेका छन। यसै सन्दर्भमा आज हामी यस्तो एक गाउँको बारेमा कुरा गर्न जादै छौं जुन कुरा सायद तपाइले यकिन गर्न सक्नु हुने छैन। रुसको उत्तरी ओसेटियामा एक यस्तो ठाउँ रहेको छ जहाँ मानिस एकपटक गए पछि फर्किएर फिर्ता आउदैनन। यस रहस्यमयी गाउँ ‘मुर्दाको शहर’ को नामले परिचित रहेको छ।
यो ठुला ठुला पहाडको बिचमा अवस्थित रहेको छ। यहाँ सफा ढुंगाले बनेको ९९ चिहानहरु रहेका छन। जहाँ स्थानीयले आफ्ना मृत परिवारहरुका शव राख्ने गर्छन। यसको निर्माण १६ औँ शताब्दीतिर गरिएको हो। यो चिहान हरेक परिवारसंग सम्बन्धित रहेको छ। जहाँ सिर्फ उनीहरुका परिवार मात्र राख्ने गरिन्छ। यस स्थानलाई लिएर स्थानीयहरुको फरक फरक मान्यता रहेको छ भनिन्छ यहाँ एक पटक पाइला टेकीसके पछि कोहि पनि मानिस फर्केर आउदैन। तर केहि पर्यटकहरु यस स्थानको रहस्य जान्नका लागि आउने जाने भने गरि रहेका नै हुन्छन।
यस स्थान सम्म पुग्ने बाटो सार्है कठिन रहेको छ। यस स्थानमा पुग्नका लागि सडक देखि करिब ३ घन्टाको बाटो हिड्नुपर्ने हुन्छ। एक रहस्य के पनि रहेको छ भने यस स्थानको मौसम हमेशा उराठलाग्दो हुने गर्छ। पुरातत्वविदका अनुसार यहाँ चिहानको नजिक एक मानव अस्थिपन्जर भेटिएको छ। साथै यहाँ हरेक चिहान पिच्छे एक कुवा पनि खनिएको छ। जब मृत शरीरलाई चिहानमा गाडिन्छ तब उनीहरुका परिवारजनले यस कुवामा सिक्का फाल्ने गर्छन। यदि सिक्का कुवाको तलसम्म पुगेर पत्थर संग ठोकिएको आवाज आएको खण्डमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाएको बुझ्नुपर्ने भन्ने मान्यता हालसम्म पनि रहि आएको छ।
Prevशारीरिक सम्बन्ध राक्दा यी घरेलु उपाय अपनाउस गर्भधारण रोक्नको लागि कुनै औसधिहरुको अब्यसक पर्दैन
Nextसुशान्त सिंह राजपुत केसले अर्कोइ रुप लियो रियाले सुशान्तको दिदीविरुद्ध उठाइन् एस्तो कदम
के बाबुराम पनि नेकपामा जाँदैछन् र ? यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा गरे
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45286)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23919)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18552)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (16693)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (14870)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13841)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12944)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12859)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12736)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12355)